Vista's Colorful Planet: နွဲ့ ရီ
Nwe ye..season 1.episodes2,pls.
Keep it up, Vista.
မတူတဲ့ စရိုက်၊ ဘဝနှစ်ခုကြားက သံယောဇဉ် ကြိုးလေး တစ်ချောင်းကိုတော့ စ,မြင်နေရပြီ၊ ဆက်ရန်ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်နေပါတယ် ညီမရေ...။
prison brake မဟုတ်ဘူးနော် ဟိဟိ။
ကိုညီလင်း ရေဆက်ပါမယ်ဗျို့ ။
ဖတ်လို့အလွန်ကောင်းသည်...
မြန်မြန် ဆက်ရေးစေချင်သည်... :-)
ရီဒါက ဖတ်ပြီး ကောမန့် မရေးပဲ ထားတာကို ခူထိ မဆက်သေးလို့ လာပြောတာအေ့ ..
Nay :) Says: